Isimboli kunye novavanyo lwengqondo kwi-Poe's Ukuwa kweNdlu ka-Usher | Uncwadi lwangoku
Isimboli kunye novavanyo lwengqondo kwi-Poe's Fall of the House of Usher
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Ababhali, Amabali, Uloyiko
Ukuwa kweNdlu ka-Usher ngomnye wemisebenzi eyaziwa kakhulu ye Edgar Allan Poe kwaye ngoku kufuneka ndibuyele kwi-Bostonia master of terror. Kweli nqaku ndibuyisa inxenye yenye yezo Umsebenzi wekholeji ukuba ngomhla wayo kwakufuneka ndisebenze. Eli xesha licatshulwa ixesha elide isimboli kunye nencoko yengqondo yomsebenzi. Ukufuna ukwazi kunye negalelo elincinci kumfanekiso wePoe enkulu.
3 Abazalwana baka-Usher
4 Poe yengqondo
4.1 Inxalenye yoluhlu olusetyenzisiweyo emva koko:
Kumntu wokuqala, umbalisi ubalisa ngotyelelo lwakhe kumhlobo wobuntwana, URoderick usher, umnini wendlu encinci engaqhelekanga. Le ndoda iyagula kwaye ikuxelela ukuba uze kuyivuyisa. Uhlala nodadewabo I-madeline yenenekazi, nayo leyo ndigula kakhulu kwaye ke uziva elusizi kakhulu.
Umbalisi uyadlula ixesha nomhlobo wakhe ezinikele ekuthetheni, efunda kwaye emamele umculo. Kodwa ngenye imini U-Lady Madeline uyasweleka, Okanye, ubuncinci, kubonakala ngathi. Baza kumshiya ebhokisini, kwigumbi elisezantsi kwendlu.
Ukusuka apho URoderick Usher uya kuphulukana nentloko yakhe ngokuthe ngcembe kwaye egula ngokugula de kube ngobo busuku buzaqhwithi aqala ukukhathazeka kakhulu ingxolo yonke indlu. Ukumqinisekisa, umbalisi uqalisa ukufunda incwadi ade ayive nengxolo leyo, enjengokulila nokulila. URoderick Usher, sele ephambene, uyayiqonda loo nto bamngcwabile ephila Kwaye kulapho iLady Madeline kubonakala kubo, inyani ebambekayo Ukusweleka komntakwabo. Ngaphambi koko kunye Ukuwa kwendlu okuzayo umbalisi ubaleka eshiya ngasemva amanxuwa ukutshona echibini lendawo ejikelezileyo.
Kuyimfuneko ukuqaqambisa ifayile ye- Indima ebalulekileyo yendlu, kuba impembelelo yayo kubalinganiswa kwaye ngokuchaseneyo iya kuthatha isigqibo. Kwakhona amandla angalunganga Oko kuxhomekeke kwimpembelelo kwaye kukhokelela ekufeni kwabo babini baphambili kunye nokutshatyalaliswa kwesakhiwo. Amandla afunyanwa ngokukhawuleza ekuqaleni kwebali xa umbalisi echaza Ukufika kwakhe kunye nemvakalelo yosizi nosizi ovelisa umbono wendlu enkulu.
Ewe, kolu luvo lokuqala, ukufa kuyaxelwa kwangaphambili kuba xa ujonge indlu kunye neendawo ezingqongileyo, ezinje ngechibi kunye nemithi eyomileyo, ungayithatha nje into esekupheleni kokumelana kwayo nexesha, njengaleyo yabemi bayo, Usher ezimbini zokugqibela. NguLady Madeline, wangcwatywa ephila ngaphambi kwexesha lakhe, obangela ukutshatyalaliswa kwendlu, ngaphambi kwexesha lakhe, kunye nokusweleka komntakwabo, ukuyitshonisa yonke echibini, kanye njengoko ibali liphela.
Nangona kunjalo, eyona nto iqulunqa ezi zinto, njengabalinganiswa abaninzi njengeemeko kunye nokusingqongileyo, yi ukongezwa kobume bengqondo, bengqondo kaPoe. Oku kunokubonwa kwisimboli yabanye babo, umzekelo, ekhaya. Indlu ngenxa yobume bayo bezindlu ichonga nomzimba womntu kunye nengcinga.
Ngale ndlela, i umzobo ingathetha ukuba ubuso, imaski ephantsi kobuntu bomntu. Eyahlukileyo imigangatho inokuba ziimpawu ze nkqo kunye nendawo. I uphahla oluphezulu kunye nomgangatho iyahambelana intloko nengcingaOko kukuthi, kwimisebenzi yokuqonda kunye nokwalathisa. Ngokuchasene noko kwigumbi elingaphantsi okanye kwigumbi elingaphantsi komhlaba iya kubonisa el engekho zingqondweni nethuku. la nqanaba ingayi iindlela zokudibana kweenqwelomoya ezahlukeneyo kunye nentsingiselo yayo esisiseko iya kuxhomekeka ekubeni ijongwa kwindawo enyukayo okanye eyehlayo.
Okucacileyo kukuba kukho ukulingana phakathi kwendlu kunye nomzimba womntu, ngakumbi kwi ukuvuleka. Ubungqina boku zezi amagama yombalisi xa emi phambi kwendlu yaseUsher, echaza iifestile ezimnyama azibonayo 'njenge Amehlo amnyama ebusweni obungenanto».
Kukwenzeka okufanayo echibini okanye kumanxuwa. Eli chibi linokuchaza izinto ezifihlakeleyo nezimangalisayo. Ngaphandle koko, i umphezulu wamanzi ayo inokufuzisela isibuko, umfanekiso wobunyani, inyani ethi itshone kulaa manzi afanayo kwaye ishiye amanxiwa kuphela. Banokuthetha abo iimvakalelo okanye amava aphilayo angasenabo ubudlelwane obubalulekileyo kodwa oqhubeka ukubakho ngaphandle kokungasebenzi okanye ukusebenza ngokubhekisele kukuphila okanye ukucinga.
Ngokunxulumene nabalinganiswa kunye nendawo ethathwa ngumbhali njengombalisi, le akangeneleli ngokukhawuleza ebalini okanye kwikamva labo baphambili. Kubonakala ngathi iPoe Uchithe ezinye zezinto ezinzima kuye Ukuyifaka okanye, endaweni yoko kuyibonakalise, eRoderick naseMadeline, ngakumbi ngaphambili.
Kuye ngokoqobo kutyhilwa kwaye enye indawo ishiywe ngaphandle, njengombonisi. Isifo sikaRoderick kunye nesifo sengqondo esixhalabisayo ziiPoe's ukuba, enkosi kuye okanye ngamehlo akhe, bangaphumela ngaphandle, bazikhulule kwaye bayeke ukuba ngumthwalo kumbhali.
U-Lady Madeline wayeza kubandakanya ubuthathaka bomoya wakhe. Iya kuba ngumfanekiso kanina Evela kwaye inyamalale kwiipaseji zendlu, kwingqondo kaPoe, kwimizamo yokubuyela ebomini ngaphandle kwempumelelo. Zonke iinguqu kwisingqi sebali ziya kuwela kuLady Madeline okanye ukukhangela umama olahlekileyo.
Kodwa kukho kwakhona iinzame zokubaleka, Yosindiso entshabalalweni nasekufeni njengoko umbalisi ebonisa esiphelweni. Yile nto inengqiqo, eqiqayo kunye nenxalenye egxile kuyo ayiqwalaseleyo evela ngaphandle kubonakala ngathi iyayala indawo leyo aya kuyo ngokwenyani. Oku kuyangqina umgca omxinwa owahlula ubunyani kubuhlanya kubomi bukaPoe kwaye ekugqibeleni yacinywa ngenxa yokuba likhoboka lotywala.
Kukwanokuthiwa uPoe wayengomnye wabokuqala abazama ukwenza i Uphando lweendlela zengqondo engekho zingqondweni. Le ndlu ka-Usher, inamagumbi amnyama, imihlaba yayo entsonkothileyo okanye ukuqhekeka embindini wefacade yayo, ithathelwe ingqalelo njengemodeli yangaphambi kukaFreudian waloo ngqondo ingazi nto.
Nini kumaxesha akhoyo indlela yengqondo Umsebenzi kaPoe, bafuna ukufumana ukwehla kumgangatho wokubhala wamabali akhe. Kodwa kwangaxeshanye, abagxeki abaqhubeka nokufunda ngomsebenzi wakhe bayaqhubeka nokumjonga a uvulindlela kwi-aesthetics, umphandi wengqondo yomntu kunye negcisa lokubhala.
Ngayiphi na imeko into ebonakalayo kukuba amabali abo ahlala kwimemori njenge umzekelo wokukhangela imfihlakalo kunye nolindelo lokoyika olwenziwe ngabantu.
Inxalenye yoluhlu olusetyenzisiweyo emva koko:
E. Cirlot, Isichazi-magama, Ezemisebenzi, Barcelona, ​​1988.
I-Norton Anthology yoNcwadi lwaseMelika, ENew York, ngo-1989.
I-Poe engaziwayo, i-anthology yemibhalo ebalekayo yi-EA Poe, Iincwadi zeLights City, eSan Francisco, 1980.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ababhali » Isimboli kunye novavanyo lwengqondo kwi-Poe's Fall of the House of Usher
Molo, kufuneka ndenze umsebenzi ngalo msebenzi kwaye kukho imibuzo emibini andinakuphendula. Zizo: Usher ufuna umbona ntoni umhlobo wakhe? Kwaye kufuneka ndichonge izinto zothando ezizithethelelayo ngezicatshulwa ezibhaliweyo.
UMaria Florence sitsho
inyanga entle kakhulu ikhonzelwe ukwenza i-monograph
ULucia Sánchez sitsho
Ungasixelela, ucinga ntoni u-Usher ngendlu ahlala kuyo?
Phendula lucía Sánchez
UMaria Teresa sitsho
Kungenzeka njani ukuba nakwinqaku lokufundisa ngoluhlobo kufuneka sikubone ukunqongophala "kokuncinci" kuvela, endaweni yokuchaneka "ubuncinci"? Yile ndlela ekuthethwa ngayo xa inentsingiselo "ubuncinci", "ubuncinci", "ubuncinci", ubuncinci "..." Okuncinci "kunentsingiselo eyahlukileyo kunye nokusetyenziswa:" Ndimdala ndim , kokuncinci andinakukuthwala ukungalunganga "; "Okukhona usiya, kokukhona kuya kufuneka ubuyele umva."
UMaria Frisa. Imibuzo eli-10 yombhali weNdikhathalele.